काभ्रेमा सडक दुर्घटना :डीआईजीसहित तीनको मृत्यु !::Hamrodamak.com
काभ्रेमा सडक दुर्घटना :डीआईजीसहित तीनको मृत्यु !
काभ्रे । मण्डनदेउपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । भने तीन जना घाइते भएका छन् ।
बा ३ च २८७ नम्बरको जीप मण्डनदेउपुर नगरपालिका ६ ढकालथोकमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी डीआईजी सुशील भण्डारी, रेडियो गौरवका जीवन पराजुली र ट्रेड युनियन कांग्रेसका प्रदेश ३ संयोजक विनोद कार्कीको मृत्यु भएको छ ।
भण्डारीको धुलिखेल समुदायिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते तीन जनाको धुलिखेलमा उपचार भइरहेको छ ।